धर्मरुपी धन [महाभारत–चिन्तन] | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
धर्मरुपी धन [महाभारत–चिन्तन]
२०७६ पुष १६, बुधबार १२:०९ गते
युधिष्ठिरले प्राचीन समयमा व्यासपुत्र शुकदेवलाई कसरी वैराग्य प्राप्त भयो ? भन्ने जिज्ञासा राख्छन् र भीष्मले त्यसको समाधान गर्ने क्रममा शुकदेव साधारण व्यक्तिले जस्तै आचरण गर्थे अनि सर्वथा निर्भय भएर विचरण गर्दै गरेको देखेर व्यासजीले उनलाई सम्पूर्ण वेदहरुको अध्ययन गराएपछि पुनः जुन उपदेश दिएका थिए त्यसैलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छन् ।
तिमीले सदैव धर्मको सेवन गरिराख । अत्यन्त जाडो, गर्मी र भोकप्यासलाई सहँदै प्राणवायुमाथि विजय प्राप्त गर । सत्य, सरलता, अक्रोध, दोषदर्शनको अभाव, इन्द्रियसंयम, तप, अहिंसा, दया आदि धर्महरुलाई विधिपूर्वक पालन गर । सत्यमा डटिराख । सबै प्रकारका कुटिलता छाडेर धर्ममा अनुराग गर । देवताहरु र अतिथिहरुको सत्कार गरेर जुन अन्न बच्छ, प्राणरक्षाका लागि त्यसैको आस्वादन गर ।
यो शरीर पानीको फोकाजस्तो क्षणभङ्गुर छ । यस शरीरमा बसेको जीव रुखमा बसेको पक्षीजस्तै हो र ऊ कतिखेर उडेर जान्छ थाहा छैन अनि प्रियजनहरुको सहवास पनि सधैँ रहँदैन । त्यसैले तिमी किन सुतिराखेका छौ ? उठ । तिम्रा शत्रुहरु सदैव सावधान, जागृत, सर्वथा उद्यत र तिम्रा छिद्रहरुलाई देख्न लागिपरेका छन् परन्तु तिमी अहिले बालकै छौ । त्यसैले बुझिरहेका छैनौ । तिम्रो आयुको दिनको गन्ती भइरहेको छ । आयु क्षीण भइराखेको छ र मानौँ जीवन समाप्त हुँदैछ । यस अवस्थामा तिमी उठेर किन दौडिन खोज्दैनौ ?
क्षीयमाणे तथाऽऽयुषि ।
जीविते लिख्यमाने च
किमुत्थाय न धावसि ।।
अत्यन्त नास्तिक व्यक्तिले मात्र यसलोकका स्वार्थहरुलाई चाहेर आफ्नो शरीरमा मासु र रगत बढाउने चेष्टा गरिरहन्छन् । पारलौकिक कार्य गर्न बेवास्ता गरेर उनीहरु सुतिरहन्छन् । बुद्धिको मोहमा डुबिरहेका व्यक्तिहरु धर्मसँग द्वेष गर्छन् र सदैव कुमार्गमै हिँड्छन् । उनीहरुको त कुरै छाडौँ उनीहरुका अनुयायीहरुले समेत कष्ट भोग्नुपर्छ । त्यसैले जो महान् धर्मबलले सम्पन्न, सन्तुष्ट र श्रुतिपरायण भएर सदैव धर्मपथमा नै हिँडिरहन्छन् तिमीले तिनैको सेवामा रहने प्रयास गर र उनीहरुसँगै आफ्नो कर्तव्य पनि सोध । ती धर्मदर्शी विद्वान्हरुको मत बुझेर तिमीले आफ्नो श्रेष्ठ बुद्धिद्वारा आफ्नो कुमार्गगामी मनलाई काबुमा राख ।
जसको दृष्टि केवल वर्तमान सुखमा मात्र रहन्छ त्यस बुद्धिद्वारा भावी परिणामलाई अत्यन्त टाढा ठानेर जो क्षणिक सुखमा निर्भर रहन्छन् र सबै अभक्ष्य पदार्थहरु खाइरहन्छन् त्यस्ता बुद्धिहीन मान्छेले यस कर्मभूमिको मह¤वलाई देख्न सक्तैनन् । धर्मरुपी सिँढीलाई चिनेर तिमी त्यसमाथि चढ्दै जाऊ । जो नास्तिक छ र धर्मको मर्यादा भङ्ग गरिरहेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई उखेलेको बाँसजस्तै विना कुनै हिच्किटाहट त्यागिदेऊ । काम, क्रोध, मृत्यु र जसमा पाँच इन्द्रियरुपी जल भरिएको छ त्यस्तो विषयासक्तिरुपी नदीलाई तिमीले सा¤िवक धृतिरुपनाउको आश्रय लिएर पार गर, जसले गर्दा जन्म–मृत्युरुपी दुर्गम सङ्कटमा कहिल्यै फस्नुपर्ने छैन ।
मान्छे जागे पनि सुते पनि मृत्युले निरन्तर उसलाई खोजिरहन्छ । भोगसामग्रीहरुको सञ्चयमा लागिरहँदा अतृप्त अवस्थामा मृत्युले उसलाई आक्रमण गर्छ । अनेक प्रकारका शरीरहरुमा जन्मँदै र मर्दै गरेर कुनै समयमा मानवयोनिमा आएर जीवले ब्राह्मणको शरीर प्राप्त गर्छ । तसर्थ तिमीले ब्राह्मणोचित कर्तव्यको पालना गर । ब्राह्मणको यो शरीर भोगविलासका लागि पैदा भएको होइन, यो त यस संसारमा दुःख उठाएर तपस्या गर्न र मृत्युपश्चात् अनुपम सुख भोग्नका लागि रचना गरिएको हो–
ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं
न कामार्थाय जायते ।
इह क्लेशाय तपसे
प्रेत्य त्वनुपमं सुखम् ।।
धेरै समयसम्म ठूलो तपस्या गर्नाले ब्राह्मणको शरीर प्राप्त हुन्छ । विषयवासनामा फसी त्यसलाई बर्बाद गर्नु हुँदैन । त्यसैले तिमीले आफ्नो कल्याण चाहन्छौ भने कुशलप्रद कर्ममा संलग्न रही सदैव स्वाध्याय, तपस्या र इन्द्रिय संयममा पूर्णतः तत्पर रहने प्रयत्न गर । जसले विभिन्न किसिमका शुभ कर्महरुको आचरण गर्छ त्यसलाई अप्राप्त र निर्दोष सुख प्राप्त हुन्छ । यसका विपरीत जसले मान्यजनहरुको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ उसले मृत्युपश्चात् नारकीय यातनाहरु भोग्नुपर्छ ।
तिमी चुपचाप किन बसिरहेका छौ ? छिटै अघि बढ । तिम्रो हृदयमा ठूलो डर उत्पन्न भएको छ । तसर्थ परमानन्दको प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर । यमराज सबैका मालिक हुन् । उनले कसैको दुःख–पीडा बुझ्दैनन् । उनले सबैको प्राण हरण गर्छन् र उनलाई कसैले रोक्न सक्तैन । त्यो समय आउनुभन्दा पूर्व नै तिमीले आफ्नो रक्षाका लागि प्रबन्ध गर्नुपर्छ । बल, अङ्ग र रुपको विनाश गर्ने वृद्धावस्थाले एकदिन तिम्रो शरीरलाई जर्जर बनाउनेछ । त्यसभन्दा पहिला नै तिमीले आफ्ना लागि ज्ञानको भण्डार भर । जुन धनको न राजासँग डर छ न त चोरसँग नै डर छ । जो मरेपछि पनि मान्छेलाई छाड्दैन त्यस्तो धर्मरुपी धनको आर्जन गर–
धनस्य यस्य राजतो
भयं न चास्ति चोरतः ।
मृतं चयन्न मुञ्चति
समर्जयस्व तद् धनम् ।।
आफ्नो कर्मअनुसार प्राप्त भएको धर्मरुपी त्यस धनलाई परलोकमा एकआपसमा बाँड्नु पनि पर्दैन । त्यहाँ त जो जसको निजी सम्पत्ति छ उसैले त्यसको भोग गर्छ । जसबाट परलोकमा पनि जीवननिर्वाह हुन सक्छ र जो अविनाशी एवं अटल धन छ त्यसैको तिमीले दान गर अनि त्यसैको आर्जन गरिराख । धेरै समयको कुरा नगरौँ घरमा आएका पाहुनालाई खाना पकाउन जति समय लाग्छ त्यति समयभन्दा पहिला नै तिम्रो मृत्यु हुन सक्छ । तसर्थ तिमीले छिटै धर्मरुपी धनको आर्जन गर । परलोक जाँदा आमाबुबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, छोराछोरी, श्रीमती, बन्धुबान्धव आदि कोही पनि साथमा जाँदैनन् । परलोकमा जाँदा त केवल आपूmले पहिला गरेका शुभ र अशुभ कर्म नै साथमा जान्छन् ।
परलोकको यात्रा गर्दा तिमीले यसलोकमा गरे÷नगरेका कर्मको साक्षी आत्मा नै हुन्छ । यसलोकमा शरीरको आश्रय गर्ने र धर्माचरणलाई देख्ने अग्नि, सूर्य र वायु तीन देवता नै परलोकमा पनि साथी हुन्छन् । दिनले सबै वस्तुलाई प्रकाशित गर्छ भने रातले तिनलाई लुकाउँछ तर यी तीन देवता सर्वत्र व्याप्त रहेका कारण सबै वस्तुहरुको स्पर्श गर्छन् । अतः तिमीले यिनीहरु साक्षी छन् भन्ने ठानेर आफ्नो धर्मको नै पालन गर । परलोकको यात्रा गर्दा बाटामा अनेकौँ लुटेराहरु भेटिन्छन् र तिनबाट आपूmलाई सुरक्षित गर्न पनि तिमीले आफ्नो सत्कर्मको नै रक्षा गर्नुपर्छ ।
जब तिमी एकदिन मर्नु नै छ तब धन, बन्धु, पुत्र आदिसँग तिमीले के लिनु छ ? तसर्थ तिमीले हृदयरुपी गुफामा लुकेर रहेको आत्मत¤वको अनुसन्धान गर । गम्भीर भएर सोच त आज तिम्रा सारा पूर्वजहरु कहाँ गए ? त्यसैले भोलि गर्ने काम आज गर अनि आज गर्छु भनेको काम अहिल्यै गर किनकि मृत्युले फलानाको काम पूरा भयो कि भएन भनेर कसैको प्रतीक्षा गर्दैन । शरीर नष्ट भएर पनि आफ्नो मृत्यु हुँदैन र शिष्ट व्यक्तिहरुद्वारा पालना गरिएको धर्ममार्गमा हिँड्नेहरुको कहिल्यै विनाश पनि हुँदैन भनेर बुझ्ने व्यक्तिहरु नै वास्तवमा बुद्धिमान् हुन् । जसले यसको सोचविचार गरेर धर्मलाई बढाउँछन् तिनै व्यक्ति विद्वान् हुन् ।
हजारौं मातापिता र सयकडौं स्त्री–पुत्रहरु अघिल्ला जन्महरुमा पनि भइसके र भविष्यमा पनि हुनेछन् । तिनीहरु हामीमध्ये कसका हुन् र हामी उनीहरुमध्ये कसका हौँ ? म एक्लै छु, न त मेरो अर्को कोही छ न म अर्को कसैको हुँ । न उनीहरुको तिमीले केही गर्न सक्छौ न त उनीहरु तिम्रो कुनै काममा आउन सक्छन् । उनीहरु आफ्ना कर्मका साथ गए र तिमी पनि आफ्नै कर्मका साथ जानेछौ ।
यस संसारमा जो धनवान् छन् उनीहरुका आफन्तीले उनका साथ आफन्तीको व्यवहार गर्छन् भने दरिद्रका आफन्ती त उनीहरु बाँचे पनि आफन्तीलाई छाडेर आँखाको ओझेलमा पर्छन् । मान्छेले आफ्नी श्रीमतीका लागि अशुभ कर्मको सञ्चय गर्छ र पुनः त्यसको फलस्वरुप इहलोकमा र परलोकमा पनि दुःख प्राप्त गर्दछ । इहलोक कर्मभूमि हो भन्ने बुझेर यसतर्पm हेरी दिव्य लोकहरुको इच्छा राख्ने व्यक्तिले शुभकर्महरुको आचरण गर्नुपर्छ । त्यस धनले के लाभ ? जसलाई मान्छेले न त कसैलाई दिन सक्छ र न आपैmले उपभोगमा ल्याउन सक्छ ? त्यस बलले के फाइदा ? जसले शत्रुहरुलाई पराजित गर्न सक्तैन, त्यस शास्त्रज्ञानले के लाभ ? जसका माध्यमबाट मान्छेले धर्माचरण गर्न सक्तैन अनि त्यस जीवात्माबाट के फाइदा ? जो न त जितेन्द्रिय छ न मलाई नै वशमा राख्न सक्छ–
धनेन किं यन्न
ददाति नाश्नुते ।
रिपुं न बाधते ।।
श्रुतेन किं येन
न धर्ममाचरेत् ।
किमात्मना यो न
जितेन्द्रियो वशी ।।
व्यासजीले भनेका उपर्युक्त हितकर वचनहरु सुनेर शुकदेवजी आफ्ना पितालाई छाडेर मोक्षत¤वको उपदेश दिने गुरूका सामु गए । धर्माचरणरुपी धनभन्दा अर्को कुनै ठूलो धन रहेनछ । धर्माचरणले नै मान्छेलाई नैतिकवान् र आस्थावान् बनाउँदो रहेछ भने यसैले यसलोकमा मात्र होइन परलोकमा समेत वास्तविक सुख र ऐश्वर्य प्रदान गर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्ने व्यक्तिले नै मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ र त्यही व्यक्ति वास्तविक रुपमा धनी पनि हुन्छ ।